OTU ESI ETINYE IHE OYIYI NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Ịwụnye akara ngosi ọhụrụ na Windows 10
Ọtụtụ ndị ọrụ mgbe ị wụnye sistemụ arụmọrụ anọgideghị na-enwe obi ụtọ na ọdịdị nke interface. Karịsịa maka nzube ndị dị otú a, Windows na-enye ike ịmegharị gburugburu. Ma, ọ bụrụ na ọ dị gị mkpa ọ bụghị naanị ịgbanwe ụdị nke windo, mana tinyekwa ihe ọhụrụ, karịsịa, akara ngosi. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa otu esi eme nke a.
Gbanwee akara ngosi na Windows 10
N'ihe gbasara isiokwu nke taa, akara ngosi bụ akara ngosi nke na-egosi ihe dị iche iche nke Windows interface. Ndị a gụnyere nchekwa, faịlụ dị iche iche, draịva siri ike, na ihe ndị ọzọ. A na-ekesa ihe oyiyi dị mma iji dozie nsogbu anyị n'ọtụtụ ụdị.
Nchịkọta maka 7tsp GUI;
Ntuziaka maka IconPackager;
Standalone iPack nchịkọta;
Wepụ akwụkwọ ICO na / ma ọ bụ PNG.
Maka nke ọ bụla dị n'elu, enwere ntụziaka nwụnye iche. Ọzọ, anyị ga-enyocha ọnụọgụ anọ n'ụzọ zuru ezu. Biko mara na arụ ọrụ niile ga-arụ na akaụntụ na ikike onye nchịkwa. Mmemme ga-agbakwa ọsọ dị ka onye nchịkwa, ka anyị na-eme atụmatụ idezi faịlụ faịlụ.
Nhọrọ 1: 7tsp GUI
Iji wụnye akara ngosi ndị a, ịkwesịrị ibudata ma wụnye usoro GUI 7tsp na PC gị.
Download 7tsp GUI
Ihe mbụ ị ga-achọ iji nweta nchedo ma mepụta ebe ịmeghachite usoro.
Gụkwuo: Otu esi emepụta ebe weghachite na Windows 10
Gbaa usoro ihe omume ma pịa bọtịnụ ahụ "Tinye mgbakwunye omenala".
Anyị na-achọ 7tsp icon mkpọ wepụtara na Ịntanetị na disk na pịa "Meghee". Buru n'uche na faịlụ ndị dị mkpa iji rụọ ọrụ nwere ike itinye na ZIP ma ọ bụ 7z Archive. N'okwu a, ịkwesighi ịkwụ ihe ọ bụla - dị nnọọ dee ebe nchekwa ahụ dị ka ngwugwu.
Gaa na nhọrọ.
N'ebe a, anyị na-ede ọkọlọtọ na igbe nlele nke gosiri na nseta ihuenyo. Nke a ga-amanye software iji mepụta ebe ọzọ weghachite. Elegharala ọnọdụ a anya: n'ime usoro a nwere ike ịnwe njehie dị iche iche, gụnyere njehie usoro.
Push "Malite ịpịcha" ma chere ka echichi ahụ mezue.
N'ọgwụgwụ ikpeazụ, ihe omume ahụ ga-achọ ka ị malitegharịa. Push "Ee".
Mgbe nyochaa, anyị ga-ahụ ihe ngosi ọhụrụ.
Iji weghachite usoro ahụ na mbido mbụ ya, ọ ga-ezuru iji meghachite site na isi e kere na mbụ. Usoro ihe omume a nwere ngwá ọrụ ya iji weghachite mgbanwe, mana ọ naghị arụ ọrụ mgbe niile.
Gụkwuo: Otu esi eweghachi usoro Windows 10
Nhọrọ 2: IconPackager
Nhọrọ a na-egosipụtakwa iji ihe omume pụrụ iche - IconPackager, nke nwere ike ịwụnye akara ngosi site na nchịkọta na mgbati IP. A na-akwụ ụgwọ mmemme a ụbọchị 30 nke ikpe.
Tupu ịmalite, echefula ịmepụta ebe weghachite.
Mwepụta IconPackager wee pịa njikọ ahụ. "Iche Nhọrọ Ngwugwu". Na-esote, mee ka onye ọbụla na-akpọ ihe "Tinye nchịkọta Icon" wee pịa "Wụnye site na Disk".
Chọta faịlụ a na-ebutebeghị na ngwugwu akara ngosi wee pịa "Meghee".
Push bọtịnụ "Tinye akara ngosi na desktọọpụ m".
Usoro ihe omume ahụ ga-egbochi desktọọpụ nwa oge, mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-agbanwe akara ngosi ahụ. Enweghi ike reboot.
Ịlaghachi icodo ochie ị chọrọ ịhọrọ "Akara Ikikere Windows" ma pịa bọtịnụ ọzọ "Tinye akara ngosi na desktọọpụ m".
Nhọrọ 3: iPack
Nchịkọta dị otú ahụ bụ ihe nchịkọta nkwakọ ngwaahịa na faịlụ niile dị mkpa. Iji jiri ha, mmemme ndị ọzọ anaghị achọrọ, na mgbakwunye, installer na-akpaghị aka na-emepụta ebe weghachite ma mee ka faịlụ dị iche iche gbanwere.
Iji wụnye, ị dị mkpa iji ọsọ na-agba ọsọ na faịlụ ahụ .exe. Ọ bụrụ na ibudatara ebe nchekwa ahụ, ị ​​ga-ebu ụzọ wepụ ya.
Anyị na-etinye igbe nlele na nseta ihuenyo, wee pịa "Na-esote".
Na windo na-esote, hapụ ihe niile dịka ya ma pịa ọzọ. "Na-esote".
The installer na-akpali gị ịmepụta ebe weghachite. Kwere site na ịpị "Ee ".
Anyị na-echere ịmecha usoro ahụ.
A na-arụgharịghachi Rollback site na iji ebe weghachite.
Nhọrọ 4: faịlụ ICO na PNG
Ọ bụrụ na anyị nwere faịlụ ndị dị iche na usoro ICO ma ọ bụ PNG, mgbe ahụ, anyị ga-eji tinker na ntinye ha n'ime usoro. Iji rụọ ọrụ, anyị chọrọ usoro IconPhile, ọ bụrụ na foto anyị dị n'usoro PNG, ha ga-achọ ka a gbanwee ha.
Gụkwuo: Otu esi gbanwee PNG ka ICO
Tupu ịmalite ntinye nke akara ngosi, mepụta ebe weghachite.
Mwepụta IconPhile, họrọ otu n'ime ndepụta ndetu ma pịa otu n'ime ihe ndị dị n'akụkụ aka nri nke interface ahụ. Mee ka ọ bụrụ otu "Ihe Oyiyi na Desktọpụ", ihe ahụ ga-ahọrọ "Drives" - Drives na draịva.
Ọzọ, pịa PCM na otu n'ime ihe ndị ahụ ma rụọ ọrụ ahụ "Gbanwee Oyiyi".
Na windo "Gbanwee akara ngosi" ntinye "Nyocha".
Anyị na-achọta nchekwa anyị na akara ngosi, họrọ ihe achọrọ ma pịa "Meghee".
Tinye mgbanwe na bọtịnụ ahụ "Tinye".
Aghaghachitere akara ngosi mbụ na iji usoro weghachite site na isi.
Nhọrọ a, ọ bụ ezie na ọ gụnyere ngbanwe akwụkwọ ntuziaka nke akara ngosi, ma enwere ikikere nke a na-apụghị ịgbagha agbagha: iji usoro a, ị nwere ike iwunye ihe oyiyi ọ bụla n'onwe ya.
Ịgbanwe nlele nke Windows bụ usoro na-adọrọ mmasị, ma otu ekwesịghị ichefu na nke a na-anọchi ma ọ bụ dezie faịlụ usoro. Mgbe omume ndị dị otú ahụ nwere ike ịmalite nsogbu na arụ ọrụ nke os. Ọ bụrụ na ị kpebie usoro a, echefula ịmepụtaghachi ihe ka i wee weghachite usoro ahụ n'ọnọdụ nsogbu.